नेपाली डाक्टरले संसार हल्लाए: मृत मानिसको मुटु झिकेर जीउँदोमा प्रत्यारोपण, सम्मान स्वरुप एक एक शेयर गराै ! « Onlinetvnepal.com
नेपाली डाक्टरले संसार हल्लाए: मृत मानिसको मुटु झिकेर जीउँदोमा प्रत्यारोपण, सम्मान स्वरुप एक एक शेयर गराै !
Published :5December, 2018 5:33 pm
मृत मानिसको मुटु आधा घन्टामा झिकेर मेसिनमा राखेर त्यसलाई पूर्ण रूपमा जीवित र सक्रिय बनाएर मुटु काम नलागेर मृत्युको मुखमा पुगेका बिरामीलाई त्यो मुटु प्रत्यारोपण गर्ने । यो विश्व चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा हासिल गरिएको चानचुने सफलता होइन । यस्तो दुर्लभ वैज्ञानिक चमत्कारको नेतृत्व गर्ने सौभाग्य पनि नेपाली डाक्टरलाई नै मिल्यो ।
नेपालसितको धितालको नाता भने ग्लोबल पोलिसी फर नेपालमार्फत जोडिएको छ । उनी त्यसका उपाध्यक्ष हुन् । नेपालमा मुटु प्रत्यारोपणको सम्भावना भए पनि त्यसका लागि तत्परता र चासो भने कम देखिएको धितालको कथन छ । भन्छन्, “राम्रो अस्पताल, चिकित्सकको टिम र प्रत्यारोपणपछिको केयरको उचित व्यवस्था भए नेपालमा पनि यो काम अघि बढाउन सकिन्छ ।” नेपाल साप्ताहिकबाट